San Marino nhau dzekufamba | eTurboNews
musha » International Yevashanyi Nhau » San Marino nhau dzekufamba
Chikamu - San Marino nhau dzekufamba
San Marino yekufambisa & yekushanya nhau kune vafambi uye nyanzvi dzekufamba. Dzazvino kufamba uye kushanya nhau paSan Marino. Dzazvino nhau nezve kuchengetedzeka, mahotera, nzvimbo dzekutandarira, zvinokwezva, mafambiro uye kutakura muSan Marino. San Marino Ruzivo rwekufamba.
San Marino inzvimbo ine makomo microstate yakakomberedzwa nekuchamhembe-pakati peItari. Pakati penyika dzekare dzekare, inochengetedza yakawanda yemapurani ayo enhoroondo. Pamateru eMonte Titano panogara guta guru, iro rinodaidzwa kuti San Marino, rinozivikanwa neguta rayo rekare rakavakirirwa nemigwagwa yakatetepa yemabwe. Iwo matatu Towers, matare akafanana nedzimba dzezana ramakore regumi nerimwe, anogara pamusoro penhongonya dzeTitano dzakavakidzana.
San Marino kubudirira kukuru paATM chiitiko
Vakuru kubva kuRepublic yeSan Marino vakaratidza kukoshesa nyika dzinokwezva uye zvirongwa zve ...
EU Vaccine Scandal ine vatatu vakundi vakuru: San Marino, Russia ...
Iyo Republic yeSan Marino yakangova mutambi wepasirese mune zvematongerwo enyika zveRussia, uye ndezve ...
Nhasi izuva raunofanirwa kushanyira San Marino: Mutambo weSan ...
Nguva yakanakisa yekushanyira San Marino nhasi. PaGunyana 3 gore rega rega, vanhu veichi chidiki ...
TIMELINE - 'San Marino Nhau' ichave iri ...
San Marino ajoina Europe-China Light Bridge chirongwa